XOG:- Isbadelka siyaasadeed Xasan Sheekh ee ku wajahan ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid (AKHRISO) - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Isbadelka siyaasadeed Xasan Sheekh ee ku wajahan ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid (AKHRISO)
Iyadoo in muddo ah la saadaalinayay in ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke uu ka mid noqon doono musharixiinta doorashada ee u tartameeysa xilka madaxweynaha Soomaaliya ee 2016-ka ayaa arrintaasi si lama filaan ah u dhacday.
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa si lama filaan ah arrintaasi u shaaciyay saacado ka hor shirkii madasha wadashiga qaranka ee Muqdisho ka socda, kaas oo ah shirkii ugu danbeeyey oo ay Muqdisho ku yeeshaaa madaxda madasha, iyo sidoo kale shir jaraa’id uu u qabtay saxaafadda.
Dad badan ayaa is-weydiinaya sababta rasmiga ah ee ka dambeeysa in ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid uu ku dhawaaqo musharaxnimadiisa xilligaasi, waxayna qaar ka mid ah dadka ku dhaw xafiiskiisa ay sheegayaan in arrintaasi ay ahayd mid uu ku talo galay islamarkaana ay ka mid tahay istraatiijiyadiisa, maadaama uu weli yahay ra’iisul wasaaraha dalka, muhimadda ugu weyna ay ahayd in shirka madasha ee ugu danbeeya uu fariisto isagoo musharax madaxweyne ah.
Khudbadii uu ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ku shaaciyay musharaxnimadiisa ayaa u muuqatay mid uu si weyn ugu weeraray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, oo saddexdii sano ee u horeeysey ee mudadiisa la daalaa-dhacaayay xasilooni darro siyaasadeed.
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ayaa sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay “xasilooni siyaasadeed”, taas oo dadka siyaasdadda falanqeeyaa ay sheegayaan inay ahayd fariin toos ugu socotay madaxweyne Xasan Sheekh oo lagu bartay siyaasad xasilooni ka dheer, waxyaabaha ugu weyn ee lagu xusi karo xasilooni daradii doorashadii 2012-kii kadib waxaa ka mid ah:-
Wax ka beddelka dastruurka oo ahayd mid aan lagu heshiin.
Khilaafkii ra’iisul wasaarihiisi u horeeyey Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid).
Maroorsiga awoodda xukuumadda.
Carqaladdii dhismihii maamulka Jubbaland.
Khilaafkii ra’iisul wasaarihiisi labaad Cabdiweli Sheekh Ahmed, kaas oo qaatay in ka badan 6 bilood.
Khilaafkii maamulka Ahlu-sunna ee ahaa kuwii casharka u dhigay Al-shabaab.
Dhismihii Galmudug oo aan laga qeyb-gelin Ahlu-sunna isla markaana ahaa mid khilaafsan dastuurka dalka oo dhigaayey laba gobol iyo ka badan.
10 bilood oo jah-wareer ah oo ka taagan dhismaha maamulka labada gobol ee harsan oo gobolka Hiiraan ku eedeynayo in madaxweynuhu doonayo in wax u dhacaan sida u rabo
Khilaafka aan dhamaan ee madaxweynaha iyo maamuladii Puntland xiligii Faroole iyo kan Gaas.
Beesha caalamka oo u aragtay madaxweynaha qof aan la isku haleyn karin kadib fadeexadii Yusra Abraar ee bankiga, taas oo kaliftay in aan Soomaaliya la siin deeqdii loo balan qaaday.
Arrimahaan kore oo dhan ayaa ahaa kuwo u baahnaa khibrad iyo xasilinooni siyaasadeed in lagu wajaho, taas oo aan dhicin, islamarkaana sababtey in giraanta siyaasadda ee dalku ay dib ugu noqotey halkeedi.
Doodda ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ee khudbadiisi koobneyd ayaa u muuqatay maadaama madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud la doortay isaga oo aan wax khibrad siyaasadeed ah aan lahayn, mirihii laga dhaxleyna ay noqotey jug-jug meeshaadi joog, ee markaan loo baahan yahay qof khibrad u leh hawlaha dowliga ah oo is-beddel ku yimaada.
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo xilka ra’iisul wasaaraha haayay muddo sanad iyo bar ah ayaa khudbadiisa ku sheegay in muddadii uu xilka haayay ay ahayd in kooban, taas oo ay u qabteen howl aad u weyn oo ay uga gudbeen xasilooni siyaasadeed.
Wuxuu Cumar C/rashiid sidoo kale sheegay si dalku horumar ku gaaro waxyaabaha dhimana loo qabto loo baahan yahay xasilooni lagu shaqeeyo, ama ha ahaato amni ama ha ahaato mid siyaasadeed, si loo dhamaystiro howlaha qabyada ah, si sanadka 2020-ka loo garo doorasho xor ah.
Dhinaca kale, ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ayaa sheegay in dalku aanu dib ugu baahneyn is-qab-qabsi kale iyo jah-wareer wakhtiga ka rida ee uu u baahan yahay xasilooni.
Wuxuu ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid sidoo kale tilmaamay inuu lee yahay khibrad ku filan oo uu dalka ku hogaamin karo islamarkaana gaarsiin karo himilooyinka loo baahan yahay, kaas oo deeqa dhamaan ummadda Soomaaliyeed ayna iska wada dhex arki karaan.
Musharixiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ee sanadkaan 2016-ka ayaa ah kuwo aad u badan, waxaana ka mid ah madaxweynihii hore ee dowladii KMG ahayd ee Soomaaliya Sheekh Shariif oo ilaa iyo haatan aan soo gaarin magaalada Muqdisho, caqabado badan haysto awgeed.
Ugu dambeyntii, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo inta badan la sheego inuu yahay musharixiinta ugu miisaanka culus doorashada dalka dhici doonta sanadkaan 2016-ka ayaa la sheegayaa inuu haysto dhaqaale aad u badan oo uu doorasho iyo tartan ku gali karo, isagoona dhinaca kale doonaya inuu ka faa’idaysto fursadda uu haatan haysto oo ah, inuu markale taladda dalka gacanta ku dhigo.
Warar hoose ayaa inoo sheegaya in tan iyo markii uu ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid ku dhawaaqay inuu yahay musharax madaxweyne, ay durba isbedeshay jawiga siyaasadeed ee Villa Soomaaliya, waxaana dadka ku dhaw xafiiska madaxweyne Xasan Sheekh ay sheegayaan in culeys weyn uu madaxweynaha fuulay, maadaama Cumar C/rashiid uu haatan yahay ra’iisul wasaare weliba khibrad siyaasadeed leh.
Si kastaba ha ahaatee, arrintaasi ayaa waxay keentay in madaxweyne Xasan Sheekh uu si deg deg kusoo saaro wareegto wax looga qabanaayo in qalinka iyo hantida dowladda loo isticmaalo magac siyaasadeed, waxaana la aaminsan yahay in isaga uu yahay qofka ugu horeeya ee magaca dowladeed uga faa’ideysanaya in mar-labaad la doorto, taas oo ay ku eedeeyeen musharixiinta kale ee badan.
Su’aasha haatan la isweydiinayo ayaa waxay tahay waxa kusoo beegay wareegtadaan uu soo saaray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo musharxnimada ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid Cali Sharmaarke ee doorashada madaxtinimo ee sanadkaan 2016-ka dhici doonta dalka.